Xiaodu Du Smart Buds, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 11/10/2021 14:00 | Nyocha
Anyị na -aga n'ihu na -akwụsịghị ịnwale ngwaahịa ndị na -arụ ọrụ iji kwado ekwentị anyị. Ndị obi abụọ adịghị ya ụzọ kachasị nke ekwentị mkpanaaka, ụfọdụ Isi ekwe nti TWS. Na emume a, ihe nlere anya mara mma ile anya na ọrụ anyị masịrị anyị n'ezie, Duodu Buds nke Xiaodu.
Ngwaahịa nke dabere ọtụtụ atụmatụ azụmaahịa gị na onyonyo a ebe ọ bụ na ha yiri Apple AirPods, n'agbanyeghị na enwere ụfọdụ ọdịiche doro anya. Ma gịnị kwa nke ahụ, nwere ike inye anyị nnukwu uru maka obere ego.
1 Nhazi ahụ nke Xiaodu Du Smart Buds
2 Ịkpọghe igbe nke Xiaodu Du Smart Buds
3 Technology onye ọ bụla
4 Isiokwu nkọwapụta Xiaodu Du Smart Buds
Nhazi ahụ nke Xiaodu Du Smart Buds
Dị ka anyị kwuru na mbido post, ọ na -apụta ihe a na -apụghị izere ezere tụnyere ọdịdị anụ ahụ nke Du Smart Buds ya na AirPods akụkọ mgbe ochie. Mana na nke a, ekweisi Xiaodu ha mara mma nke ukwuu n'èzí nke nti. Agbanyeghị na akụkụ dị n'ime bụ otu.
Ha nwere a n'ụdị ntị ma ọ bụ na ntị, ya bụ na onye nnata dị n'ime ntị. NA akụkụ nke na -apụ apụ dị ka "osisi" ụlọ ndị ahụ njikwa aka iji jikwaa ọkpụkpọ ọkpụkpọ na oku ekwentị. Ha dịkwa nke e ji plastik na -egbu maramara wuo, nke, dị ka anyị kwuru, na -echetara anyị ọtụtụ Apple. Ọ bụrụ na ha bụ ihe ị na -achọ, nweta Du Smart Buds site na Xiaodu ebe a.
Onye nrụpụta na -ekwu na ọ bụ ya ihe bụ "akpụkpọ anụ" Ma ọ bụghị naanị na ha anaghị emerụ akpụkpọ ahụ ahụ, mana nyere ha ntakịrị ntakịrị ị gaghị achọpụta na ị na -eyi ha. Nke bụ eziokwu bụ na imewe akụkụ nke ekweisi nke na -eche ihu na ntị dabara n'ụzọ dị ebube. Ọ naghị ada site na mmegharị, ọ naghịkwa pịa. NA anyị enweghị mpempe akwụkwọ na -ese okwu roba nke ọtụtụ ndị ọrụ kpọrọ asị.
El ikpe ebubo, tinyekwara n'ime Agba ọcha, na nke a ha nwere matte imecha, na ha dịkwa nro nke ukwuu imetụ aka. O nwere USB Type C nkwụnye njikọ ọ dabara nke ọma na akpa ọ bụla. Nwere ọdịdị oval a na -ejikwa ya magnet mkpọ ka ekweisi wee dabara ozugbo mgbe anyị tinyere ya.
Ịkpọghe igbe nke Xiaodu Du Smart Buds
Dịka anyị na -eme ngwaahịa ọ bụla anyị nwetara, anyị nwere ntakịrị oge lelee ma gwa gị ihe anyị hụrụ n'ime igbe ahụ. Site na ekweisi, ọ bụghị ihe dị mma ịhụ ọ bụghị ihe ijuanya, na enweghị ihe ijuanya, o nwere. N'ime igbe anyị na -ahụ naanị ekweisi onwe ha na -abatalarị na akpa ha.
Na mgbakwunye, na chaja nja, na nke a na usoro USB Cdị C. Na nkenke ndu eji ebe akọwara anyị otu esi aga n'ihu ijikọ na ekwentị anyị. Ụfọdụ ndụmọdụ maka iji. N'ikpeazụ, ndị ochie akwụkwọ ikike nke ngwaahịa.
Technology onye ọ bụla
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ọmarịcha ihe na -amasịghị ya ma ị na -achọ ihe ọzọ, anyị ga -agwa gị uru nke Xiaodu Du Smart Buds nwere. Otu njiri mara nke anyị ga -elele mgbe ịzụrụ ekweisi, dịka iwu n'ozuzu, dị ụda na ha na -enye. Xiaodu akwadowo ụfọdụ ekweisi ndị a Ndị ọkwọ ụgbọ ala 13mm na -ahụ maka ụda dị omimi na ịdị omimi na ụda bass y ebe a ị nwere ike zụrụ nke gị ọnụahịa kacha mma.
N'akụkụ ekweisi a na -eche n'ihu, na njikwa aka. Site na otu igodo ma ọ bụ karịa anyị nwere ike nye iwu ka arụ otu ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọzọ. Iwu ndị a na -ahazi na ha nwere ike inyere anyị aka kwuo egwu, kwụsịtụ ma ọ bụ mụta nwa, ma ọ bụ zaa oku, n'etiti ndị ọzọ.
Akụkụ ọzọ kachasị ewu ewu bụ Nkagbu Noise, anyị ga -ekwukwa na Xiaodu Du Smart Buds nwekwara teknụzụ a. Mbelata mkpọtụ nke na -enwe mmetụta karịa dị irè na oku ekwentị nke ọ na -ejisi ike kagbuo mkpọtụ mpụga iji nye anyị ahụmịhe dị ọcha na nke anaghị ebipụ.
Nweta nke gị Du Smart Buds na Aliexpress na ọnụahịa kachasị mma
La Njikọ Bluetooth 5.0 ọ na -ekwe nkwa nkwụsi ike na oku na -enweghị mbepụ ma ọ bụ mwepu ahụ erughị ala. ya obere oge na -eme ka Duod Buds nke Xiaodu pụta dị mma maka ndị na -eji ekwentị ha amịpụta egwuregwu kachasị amasị ha. Na anyị enweghị ike ịkwụsị ịkọwa ọrụ osise, maka mkparịta ụka dị mkpa ma ọ bụ ncheta olu.
La nnwere onwe ọ bụkwa otu n'ime isi ihe dị mkpa. Anyị hụrụ oge nke ruo awa anọ na -aga n'ihu na -akwụ ụgwọ ekweisi. Anyị na -agụkwa, na ikpe ahụ, na elu ụgwọ atọ ọzọ zuru ezu. Yabụ na anyị nwere nnwere onwe mkpokọta ruo awa 16 ọ dịghị mkpa ịpịnye ha.
El ejikọtara nke Du Smart Buds nke Xiaodu, ozugbo arụnyere na ngwaọrụ anyị, ọ bụ ngwa ngwa. Anyị kwesịrị iwepụ ha n'okwu ahụ ma tinye ha na ntị anyị ka ha wee jikọọ na akpaghị aka. Na nkọwa nke na -agbakwụnye isi ihe bụ IPX4 asambodo maka mgbochi mmiri, ka ịgba na mmiri ozuzo ma ọ bụ ọsụsọ n'onwe ya ghara inwe ihe mgbochi.
Isiokwu nkọwapụta Xiaodu Du Smart Buds
Nlereanya Du Smart Buds
Onwe ya ruo awa 16
Mmiri mmiri IPX4 asambodo
ọkà okwu 13 mm
Ibu ibu 40 grams
Akụkụ ekweisi X x 36 17.1 18.4 mm
Akụkụ nchaji X x 52 56 24 mm
Ahịa 32.14 €
Linkzụta njikọ Du Smart Buds nke Xiaodu dere
Na usoro ntị, nke kachasị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Akụrụngwa dị nro na mmetụ, akpụkpọ anụ.
Nnwere onwe nke ruru awa 16.
Enwere ike ịdekọ ndetu olu ozugbo.
Skin enyi na enyi
Nnwere onwe ruo awa 16
Ohere ịdekọ olu
Nhazi na -abụghị nke na -echetara anyị AirPods a ma ama.
Nnọọ ihe “unyi” na -akwụ ụgwọ.
Okwu ụgwọ ihe
Ihe na: 11 October nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 10 October nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Xiaodu Du Smart Buds, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa